Feysal Axmed iyo Cabdullaahi Daahir: Saaxiibo meel qura lagu wada dilay Weerarkii Nairobi [Warbixin] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Feysal Axmed iyo Cabdullaahi Daahir: Saaxiibo meel qura lagu wada dilay Weerarkii Nairobi [Warbixin]
21-kii qof ee ku dhintay weerarkii Al Shababaab ay ku qaadeen dhismaha Dusit D2 ee xaafadda Westland ee magaalada Nairobi oo socday muddo 20 saacadood ah, dadkii ku dhintay waaa ka mida ahaa saaxiibbo Soomaali ah oo iyagoo qadeynaya hakaasi lagu dilay.
Labadan saaxiib oo isla dhintay waxay kal ahaayeen Feysal Axmed iyo Cabdullaahi Daahir. Feysal wuxuu ahaa La-taliye arrimaha horumarka, da’diisu waxay ahayd 31 jir iyo saxiibkiis Cabdi Daahir oo isna 33 jir ahaa, waxayna ka wada shaqeynayeen hey’adda Adam Smith International ayaa ku qadeynayay maqaaxi ku taalla dhismaha, kahor inta uusan weerarka bilaabanin.
Saaxiibbada iyo ehellada ayaa saaxiibtinnimada Axmed iyo Daahir ku tilmaamay mid aan la qiyaasi karin. Cabdullaahi Keynaan oo ah seeddiga Feysal ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in labadooda ay ahaayeen saaxiibbo aad isugu dhowaa.
”Aad ayay isugu dhowaayeen, dadkuna waxayba lahaayeen way isla dhiman doonaan”. Feysal iyo Cabdullaahi ayaa sidoo kale kasoo wada shaqeeyay hay’adda Somalia Stability Fund, taas oo ka shaqeysa nabadeynta Soomaaliya.
Maxamed Cabdilatiif oo ay saaxiibbo ahaayeen Feysal ayaa sidoo kale sheegay inuu ahaa qof aad u kaftan badan oo farxaan ah, qof walba oo ay is garanayeenna uu aad u jeclaa, waxaana uu dhintay iyadoo xaaskiisa ay leedahay uur 7 bilood ah.
Cabdullaahi ayaa isna bartiisa Linkedin oo ah meel dadku ay ku keydiyaan maclumaadka shakhsiga ku qoray in uu jecel yahay inuu dadka la wadaago sheekooyinka dadka nugul, gaar ahaan dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay colaadaha, mar walabana uu jeclaa inuu dunida ku baraarujiyo saameynta colaadaha.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo: “Waxaan telefoon kula hadlay Uhuru Kenyatta, Somalia waxay garab taagan tahay Kenya..”
Next articleKASHIFAAD: Sidee Dowladda Madaxweyne Farmaajo u laaluushtaa Warbaahinta Xorta ah [Dhageyso]